Ndeipi nzira yakanakisisa yekugadzirisa Amazon listings yevatengesi vese?
Amazon ndiyo yakawanda yenjini yekutsvakurudza injini, kunyanya iyo inobata nekutengeserana kwepaIndaneti kune zvipi nezvipi zvaunogona kufunga. Uye mukati mako mune mutengesi mucheki kune uko, iwe unofanirwa kuziva mitemo mikuru yemutambo kuitira kuti kuponesa pane iyo nzvimbo yemisika yematengesi zvive nyore nyore kwauri. Uye iyo nzira yakanakisisa yekuita nzvimbo yakasimba yekutengeserana kwako kwekutengeserana ndeyokugadzirisa Amazon yako listings nokuda kwekutsvaga zvinyorwa zvinyorwa kuitira kuti zvigadzirwa zvako zvioneke zvakajeka muchigadzirwa SERPs. Ndicho chikonzero pasi apa ndichaenda kukupa mazano mashomanana uye mazano ekugadzirisa Amazon listings sepro, kunyange iwe uchiri kutarisa somutengesi wechivhisi anotora matanho ake okutanga kumufambisi wekupedzisira kubudirira ikoko.
Nzira yekugadzirisa Amazon Listings sePro Pro
Pamberi pezvimwe zvinhu, ngatitarisei - Amazon search optimization nguva dzose inotanga nekuumba peji yakanyatsotsanangurwa peji ye chero chigadziro chawawana pakutengesa. Paunenge uchigadzira zvinhu izvi zvepakigadzirwa yako peji peji, zvakakosha chaizvo kuti uve wakarurama asi zvakanyatsonyatsonyora kuti unyora peji yezvigadzirwa zvakasimba chaizvo izvo zvingadai zviri kutungamirira mumwe nomumwe anenge aine mutengi kuti aite kutenga kwekupedzisira kunyanya newe, uye hakuna imwe nzvimbo - restaurant appraisal seattle. Ndicho chikonzero ndinokurudzira kuumba zvakakosha zvezvikamu zvako zvekugadzira peji peji kuitira kuti uone Amazon yako zvinyorwa, sezvinotevera:
Product Title - inofanira kunge iri yakasiyana uye yakananga. Ita kuti yakarurama uye inofadza kuAustralia's general style yezvigadzirwa zvemiti sezvinobvira. Kuita kudaro, yeuka - chigadzirwa chako chechigadzirwa ndiyo nzvimbo yakanakisisa yekugadzirisa hurukuro yako yezvinyorwa zvinyorwa uye nguva refu-muswe kutsvaga mitsara mukuderedza kurongeka kwekukosha kwavo. Cherechedza, zvisinei, iwe unonyatsorudzirwa kuti udzivise chero ipi zvinyorwa zvinyorwa zvinyorwa zvinoshandiswa zvose zviri mumusoro wako wechigadzirwa, uye kuburikidza nezvose zvese zvezvikamu zvemugadziri wezvikamu zvaunazvo.
Bullet Points - chikamu chemufananidzo wezvigadzirwa zvemiti zvinowanzovakwa nemashanu ekutumira mashoko. Ita kuti vafukidze chete ruzivo rwakakosha zvikuru kuitira kuti vagone kurondedzera zvinhu zvakakosha zvidimbu / zvikomborero zvezvinhu zvako zviri kutengeswa. Ichokwadi, iyo "yakanaka" urongwa hwemabhomba inotarisirwa kuti idzokezve iyo inonyanya kukoshesa ruzivo rwakatanga kuziviswa mubhuku rako remaitiro.
Chirevo Chinyorwa - chaizvoizvo, chikamu chakawedzerwa chekunyora kwako. Nenzira iyo, tsanangudzo yako yezvigadzirwa inoshandiswa kujekesa maitiro makuru echinhu chiri kutengeswa, yakatsigirwa nezvinhu zvacho zvekushandiswa kwaro kwezuva nezuva / kugadzirisa. Funga uchisanganisira pano zvikamu zvinotevera: maitiro ekugadzirwa, zviyero zvezera / unyanzvi, zviri mukati nemamiriro ezvinhu zvechigadzirwa, nzvimbo yakabva, nezvimwe zvakadaro. Cherechedza, zvisinei, kuti haufaniri kuisa pano ruzivo pamusoro pemugadziri uye mutengo, kana chero dhesi yekutsvaga zviri pachena.
Chigadzirwa Zvifananidzo - zvinomirira mifananidzo yemifananidzo inopa tsanangudzo yezvimwe zvezvigadzirwa uye zvakarongororwa zvachose zvinoratidza kumativi ose emabasa ayo makuru uye nzira dzokushandiswa. Ichi chikamu chinokurudzirwa kusanganisira zvitanhatu kana kuti zvinomwe zvinomanikidzira mifananidzo, iyo inofanira kunge yakanyatsogutsikana kune vose vanogona kuva vatengi vanofunga kugadzira kutenga newe.